Nokia 8 gosipụtara igwefoto abụọ site na ZEISS na ọtụtụ ndị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Nokia 8 gosipụtara site na igwefoto abụọ site na ZEISS na ọtụtụ ndị ọzọ
Nokia alaghachila na ụgwọ n'okpuru ikike nke ego itinye ego na China, o doro anya na Nokia ọhụrụ nwere obere ihe ma ọ bụ ihe ọ bụla jikọrọ ya na Nokia ochie, agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na anyị ga-ahụ ezigbo ngwaọrụ dị mma. Bọchị ole na ole gara aga ọjà dara ka mmekọrịta ọhụụ n'etiti ZEISS na Nokia, nke yiri ka ekwenyela taa ekele maka nchapu ọhụụ nke anyị nwere ike ịhụ Nokia 8 n'ebube ya niile.
Igwefoto abuo, nke ZEISS bịanyere aka na ya di nma na acha odo odo. Nke a bụ otú Nokia si achọ imebi obi anyị ọzọ juputara n’oké agụụ maka akara nke hụrụ anyị n’usoro nke usoro ekwentị.
Anyị na-amalite na na igwefoto 13 MP na ihe mmetụta abụọ, arụpụtara na ngwa anya nke ụlọ ọrụ Carl Zeiss, ọ dịghị ihe ọzọ na ihe na-erughị. Ma nke ahụ abụghị ihe niile, ọ ga-esonyere ya na panel 5,3-inch (obere ọnụọgụ nke ụlọ ọrụ China họọrọ) na mkpebi 2K ọ nweghị ihe ọzọ. Maka nke a, ị ga-achọ ike nke a Qualcomm Snapdragon 835 ihe karịrị ghọtara, mgbe 4GB ma ọ bụ 6GB Ram A ga-ahapụ ha ịhọrọ nke onye ọrụ.
Na usoro nke nchekwa anyị ga-enwe naanị 64GB nke nchekwa nke anyị ga-agbasa ekele maka oghere kaadi microSD ya, na dị ka ezigbo China ọ bụla na-etu ọnụ, SIM abụọ. Otu nke VentureBeat enwewo ike inweta ozi a yana foto ndị mbụ nke ngwaọrụ ahụ. Ọ bụ eziokwu na ọ gaghị enwe ike ịsọ mpi na oke nke Samsung Galaxy S8, mana kpachara anya n'ihi na ọ dị nso nso na ndị ọzọ dịka Motorola, LG ma ọ bụ Huawei, ihe niile ga-adabere n'ụzọ ha si anwa ha. anyị na ọnụahịa na nkenye ha nwere na ahịa ndị ọzọ gafere nnukwu Asia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Nokia 8 gosipụtara site na igwefoto abụọ site na ZEISS na ọtụtụ ndị ọzọ
Otu nzọụkwụ dị nso na ọnụọgụ Internetntanetị na-ekele ọrụ nke ndị nchọpụta China